Gudoomiye Kuxigeenka Golaha Guurtida Somaliland Siciid Jaamac Cali oo halkaa hadal furitaan iyo soo dhaweyn ah ka jeediyay
Wednesday June, 20 2018 - 00:38:49
Sunday May 21, 2017 - 10:44:03 in by Ayaanle Hassan
Hargeysa(AFKA);Gudoomiye kuxigeenka Golaha Guurtida Somaliland Siciid Jaamac Cali ayaa Munaasibad qado sooryo ah kusoo dhaweeyay xubno kamid ah Golaha Baarlamaanka Dalka Jabuuti oo maalmahan ku sugnaa Caasimada Somaliland ee Hargeysa.
Munaasibadan oo lagu qabtey Huteelka Golis ee Magaalada Hargeysa,ayaa aheyd mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana, ay kasoo qeyb galeen Xubnaha Dawlada kaga jira Sanaag Bari iyo Xildhibaanada Guurtida iyo Wakiilada aqoonyahan madaxbanaan iyo martsi sharaf kale,oo aaney ukala hadhin Sanaag Bari oo si diiran usoo dhaweynaya maalmahan dambe waftiga Reer Jabuuti.
Gudoomiye Kuxigeenka Golaha Guurtida Somaliland Siciid Jaamac Cali oo halkaa hadal furitaan iyo soo dhaweyn ah ka jeediyay ayaa sheegay in si
aad ugu faraxsan yihiin in ay halkan Somaliland ku maamuusaan waftiga Xildhibaanada Reer Jabuuti islamrkaana, ay kasii kordhin doonaan intan soo dhaweynta iyo Martiqaadkaba.
Waxa kale oo iyaguna halkaa ka Hadley xubno tira badan oo kamid ah Xildhibaano,Wasiiro iyo xubno kale oo isugu jira waxgarad duqey iyo aqoonyahano madaxbanaan oo dhamaantoodba kasoo jeeda Sanaag/Bari.
Munaasibadahan Siyaasiyiinta kasoo jeeda Sanaag/Bari kusoo dhaweynayaan waftiga Reer Jabuuti ayaa noqon doona kuwa kasii socda Caasimada Somaliland ee Hargeysa ilaa inta laga gaadhayo gundhigooda.